Mareykanka oo in Taliban la wareegto Kabul ku tilmaamay ‘arrin qalbiga xanuujineysa’ | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo in Taliban la wareegto Kabul ku tilmaamay ‘arrin qalbiga xanuujineysa’
Mareykanka oo in Taliban la wareegto Kabul ku tilmaamay ‘arrin qalbiga xanuujineysa’
“Mareykanka wuxuu sameyn doonaa wax kasta oo suurta-gal ah oo aan awoodno, si aan uga soo baxno dalka, haddii taas ay tahay waxa ay doonayaan, Taliban waxba ma aynan weydiisan. Waxaan u sheegnay haddii ay faraha lasoo galaan shaqaalaheena ama holwgalladeena inta aan ka baxeyno, ay jiri doonto jawaab deg deg ah oo adag,” ayuu Blinken u sheegay telefishinka CNN.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Sabtidii amray in 1,000 askari oo kale oo dheeraad ah loo diro Kabul, si ay gacan uga geystaan sugidda ammaanka hantida iyo shaqaalaha Mareykanka iyo Afgaaniyiinta la shaqeeyey ciidamada Mareykanka.
Guud ahaan 4,000 oo Mareykan ah ayaa la filayaa in tagaan Kabul maalmaha soo socda, si ay u xoojiyaan 650 oo askari oo Mareykan ah oo dalkaas horay u joogay.
Sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistaan Madaxweyne Ashraf Ghani iyo ku xigeenkiisa Amrullah Saleh isaga baxay dalka oo intiisa badan ay la wareegtay kooxdu.
Madaxweyne Ghani ayaa waayihii dambe la kulmaayay cadaadis ah inuu iska casilo xilka madaxtinimada, maadaama magaalooyinka waaweyn ee ku hareereysan caasimadda Afgaanistaan ay gacanta u galeen mintidiinta Taliban.
Dr. Xuseen Yoonis Xasan oo ah sarkaal sare oo Soomaali ah, kana tirsan Qaramada Midoobey ayaa isagii ku sugan Kabul waxa uu u waramay Radio Muqdisho, isagoo sheegay in magaalada ay gacan ku heynteeda la wareegtay Taliban.
Hoggaamiyaha Taliban oo ku sugan madaxtooyada dalkaas ayaa ka soo muuqday warbaahinta. Waxaan la sheegay in kooxdu shaacisay inay berri ku dhawaaqi doonto dowlad islaami ah.
Previous articleGuddoomiyihii guddiga xalinta khilaafaadka doorashada oo geeriyooday
Next articleMadaxda Golaha Wadatashiga Qaranka oo kulan ay yeesheen ku go’aamiyey shir ka dhaci doona Muqdisho